गर्मी, वर्षात् र कोरोनाका बेला अनुहारकाे यसरी ध्यान दिन सकिन्छ::Best Online News Portal of Nepal
रश्मिला श्रेष्ठ नेपालको ब्युटिसियनको बजारमा चलेको नाम हो । महिलाहरू मात्र नभइ ‘रश्मिलाज् फेसियल हाउस’मा पुरुषहरूलाई पनि ब्युटिसियनको सेवा दिने गरिएको छ । काठमाडौं मल सुन्धारा र बिजी मल गोंगबुमा रश्मिलाज् फेसियल हाउसले ग्राहकहरूलाई सेवा दिँदै आएको छ । लामो समयदेखि यी दुई स्थानमा सौन्दर्यसम्बन्धी सेवा दिने गरिएको छ । अहिले गर्मी, वर्षात र कोरोनाको समस्या छ । यस्तो अवस्थामा अनुहारलाई महिलाहरूले कसरी हेरचाह गर्ने भनेर वरिष्ठ सौन्दर्यविद् श्रेष्ठसँग onlinenepal.com का लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
० गर्मी र वर्षतको समयमा महिलाहरूले घरमै अनुहारको हेरचाह कसरी गर्ने ?
– यो समयमा तापक्रमले गर्दा अनुहारमा चिल्लो देखिएको हुन्छ । चिल्लोलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि बिहानमा ब्ल्चिङ गर्ने । फेसवास गर्ने । दिउँसो पनि हामीले चिसो पानीले अनुहार तीन पटक सफा गर्ने अर्थात धुने । यो समयमा तातोपानीले अनुहार नधुने । दिनमा तीन पटक चिसो पानीले अनुहार धुँदा अनुहारको चिल्लो कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ । हाम्रो छालाको स्याहार सुसार सधैं गर्न जरुरी छ । त्यसमाथि हाम्रो मुहारको छालालाई बढी नै प्रत्यक्ष रुपमा घाम र वातावरणको सम्पर्कमा आउने हुनाले मुहारको छालालाई चाहिं विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । जसमध्ये नियमित फेसियल मसाज एक उत्तम उपाय तथा उपचार हो ।
० कुनै महिलाको फुस्रो वा ड्राइ अनुहार छ भने त्यसको हेरचाह कसरी गर्ने ?
– दिनको दुई पटक अनुहार चिसोपानीले धुने । बाहिर हिँड्दा सनस्क्रीन प्रोडक्टहरू लगाउने । गर्मी महिनामा ओइली स्किन हुन्छ । फेस स्किन ५ किसिमको हुन्छ । ओइली स्किन, ड्राई स्किन रकम्विनिसिन स्किन, सेन्सिटिब स्किन, नर्मल स्किन । गर्मीमा प्रायः ओइली स्किन हुन्छ ।
० सनस्क्रीन प्रोडक्ट सस्तो र राम्रो कुन हुन्छ ?
– यही भन्ने छैन । आफूले हेरेर कुन मन पर्छ त्यही लगाउँदा हुन्छ । कसैले ब्राण्डवाला लगाउन मन पराउँछन् । कसैले आफ्नो गच्छेअनुसार पनि लगाउन सक्छन् । हामीले यही ब्राण्ड भन्न मिल्दैन । ब्राण्डका विषयमा यो या त्यो लगाउन भन्न उपयुक्त हुँदैन । सकेसम्म गुणस्तरीय नै लगाउनु राम्रो हुन्छ । अनुहारमा खेलवाड गर्नु हुँदैन ।
० नेपालमा जहाँ पनि पाइने ब्राण्ड कुन हो ?
– अहिले नेपाली बजारमा धेरै उत्पादनहरू चलिरहेका छन् । यही भन्न सकिदैन । रश्मिलाज् फेसियल हाउसमा ‘रश्मिला एड्भान्स सनस्क्रीन क्रिम’ छ । हाम्रोमा आउने ग्राहकहरूलाई यही प्रोडक्ट प्रयोग गर्न सुझाव र सल्लाह दिने गरेका छौं । हाम्रै सनब्लक दिने गरेका छौं । यो आइबरी मिल्कबाट बनेको हुन्छ । हामीले ब्लिचिङ गर्ने, फेसियल गर्ने, रिङकलको भनेर एउटा मोस्चराइजर र सनब्लक दिएर पठाउने गरेका छौं ।
० वर्षात र गर्मीको समयमा अनुहारमा लगाएको मेकअप पसिना वा पानीले बग्ने गर्छ । त्यसले साइड इफेक्ट गर्छ कि गर्दैन ?
– त्यस्तो साइड इफेक्ट त केही पनि हुँदैन । अनुहारबाट बगेको बेला टाटाटुटी त देखिन्छ । त्यसलाई सफासँग मेकअप गर्नुपर्छ । मेकअप गरेको आधा घण्टामा अनुहार धोएर फ्रेस राख्नुपर्छ । त्यसपछि सनलोसन, सनस्क्रीनहरू लगाएर बाहिर घाममा निस्कदा उचित हुन्छ ।
० महिलाहरूले साबुनले मुख धुँदा असर गर्छ कि गर्दैन ?
– साबुनले मुख धुँदा अनुहार ड्राई हुन्छ । स्कीन फुस्रो हुन्छ । स्कीन पटपट फुट्ने पनि हुन्छ । अनुहारबाट पाप्रा निस्कन्छ पनि । म चाहिं साबुनले अनुहार धुनु सल्लाह दिन्न ।
० गर्मीमा पसिना आउँछ । धुलो, धुँवा टाँसिएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अनुहारलाई कसरी धुने त ?
– अहिले फेसवास आइरहेको छ । ड्राइस्कीनको लागि मोस्चराइजर भएको फेसवासहरू हुन्छ । ओइली स्कीनको लागि ओइल कन्ट्रोल फेसवासहरू पाइन्छ ।
० गाउँमा बस्ने महिलाहरूले आफ्नो अनुहारलाई कसरी सुरक्षित राख्न सक्छन् ?
– गाउँमा बस्ने धेरै महिलाहरूले सनब्लक लोसनहरू लगाउँदैनन् । गाउँमा प्रकृतिले पनि साथ दिएको हुन्छ । शहरमा जस्तो गाउँमा विभिन्न कुरा लगाउनु पर्दैन । कसैकसैले पनि मात्रै सनब्लक र मोस्चुराइजर लगाएको पाइन्छ । गाउँमा शहरमा जस्तो धेरै समस्या हुँदैन ।
० आँखामा लगाइने गाजल बगेको हुन्छ । गाजल आँखामा पस्यो भने असर गर्छ कि गर्दैन ?
– गाजलको प्रोडक्टमा भर पर्ने कुरा हो । कमसल खालको अर्थात गुणस्तरहीन गाजल लगाएको छ भने आँखामा असर पर्न सक्छ । आँखाको हेलचेक्र्याइ गर्नु हुँदैन । राम्रो खालको गुणस्तरीय गाजल लगाउनुभयो भने असर पर्दैन । गाजल बग्न नदिनको लागि पाउडर लगाउनुपर्छ । गाजल लगाउँदा गाजलको वरिपरी पाउडर लगायो भने बग्ने सम्भावना कम हुन्छ ।
० टिनेजर युवतीहरूमा अनुहारमा डण्डीफोर आएको हुन्छ । त्यसलाई हटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन ?
– त्यसलाई मजाले हटाउन सकिन्छ । त्यो आउने भनेको हर्मोनको कारणले हो । त्यस्तो डण्डीफोर आएको छ भने दिनमा चार पटकसम्म फेसवासले मुख धुनुपर्छ ।
० डण्डिफोर आउँदा कहिले काहिँ कालोदाग बसेको हुन्छ । त्यसलाई हटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन ?
– हटाउन मिल्छ । ओइल कन्ट्रोल रिमुभ क्रिम लगाएपछि त्यस्तो दागहरू हट्छ ।
० गर्मीको समयमा लिपिस्टिक लगाउनु राम्रो हो कि होइन ?
– लिपिस्टिक महिलाको सुन्दरता पनि हो । गर्मी वा जोडो भन्ने हुँदैन । गर्मी भए पनि लिपिस्टिक लगाउनु त पर्छ । अहिले नबग्ने लिपिस्टिक पनि बनेको छ । बजारमा आएको छ । म्याटमा लिपिस्टिक निस्किएको छ । गर्मी महिनामा त्यही म्याटकै लिपिस्टिकहरू लगाउँदा राम्रो हुन्छ । यो लिपिस्टिक बग्नबाट रोकिन्छ ।
० कोरोनाको महामारी छ । यस्तो अवस्थामा मास्क लगाउनुपर्ने बाध्यता छ । मास्क लगाउँदा क्रिम पाउडर वा लिपिस्टिक लगाउन हुन्छ कि हुँदैन ?
– यतिखेर क्रिम, पाउडर वा लिपिस्टिक लगाउँदा सबै मास्कले छेकिदिन्छ । यस्तो अवस्थामा गाजल, आइब्रो, क्रोर्नु, सनब्लकहरू लगाउँदा राम्रो हुन्छ ।
० रश्मिलाज् फेसियल हाउस कोरोनाका बेला खुलेको छ कि छैन ?
– हाम्रो रश्मिलाज् फेसियलाज् फेसियल हाउस खुलै छ । लकडाउन खुलेपछि पसल खोलेका छौं ।
० कोरोना महामारीको बेला तपाईले कस्तो सुरक्षाका उपाय अपनाउनु भएको छ ?
– हाम्रो बिजीमलस्थित पार्लर नेपालको मलहरूमा खोलिएका मध्येकै ठूलो स्पेश भएको पार्लर भएकाले सोसियल डिष्टेन्समा ग्राहकहरूलाई सेवा दिइरहेका छौं । कामदारले पीपीईसेट, फेस सेड, माष्क, पञ्जा, लगाएर कैंची, रुमाल, लगायतका सबै सामग्री निर्मलीकरण गरेर सर्भिस दिइरहेका छौं ।
सामाजिक सञ्जाल इमोमा २५ लाखको चिट्ठा परेको छ भन्दै ठगी गर्ने पक्राउ
अन्डरवर्ल्ड डन दाउदको अर्बौ रकम चलाउने पाकिस्तानी नागरिक खानानीबारे यस्तो खुलासा
भारतमा कोरोना संक्रमणका कारण केन्द्रीय रेल राज्यमन्त्रीको निधन
आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन मंसिर २७ मा हुने
बजेट अर्थ राजनीतिक दस्तावेज हो: अर्थमन्त्री खतिवडा
मिडियाको चाहना मन्त्रीहरूले पूरा गर्न सक्दैनन् : हरि पराजुली,पूर्व कृषि मन्त्री
प्रहरीमा बरियताक्रम भन्दा पनि सक्षमलाई नेतृत्वको जिम्मा दिनुपर्छ : पूर्व एआईजी ढकाल (भिडियाे सहित)